XOG:- Sedax Qalad oo waaweyn Shiiq umul ma waxuu aminsanyahay in gaalo yihiin dadka qaar ? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XOG:- Sedax Qalad oo waaweyn Shiiq umul ma waxuu aminsanyahay in gaalo yihiin dadka qaar ?
Mogadishu 21 November 2019 21 November 2019
Shiiq maxamad abdi umul oo aad looga yaqaano gayiga somalida kana mid ah culumada muxaadarooyinka ku can baxay ayaa lagu wadaa in malinta jimcaha uu muxaadaro ku qabto magaalada muqdisho .
Muxaadarada ayaa loogu magac daray” musuubiyinka iyo sababaha keena iyo sida looga gudbi karo.
SHiiq somow “Shiiq umal oo inta badan fadwooda ayaa waxa lawada og yahay in uu hada kahor xalaaleeyay hilibka waraabaha in lacuni karo sidoo kale shiiqan waxuu dood la galay culimada dariiqada suufida oo uu aaminsanyahay sida uu fagaarayaal ka sheegay in ay fikir qaldan aaminsanyihin gaalana ay yihiin .
Muxaadarooyinka qaar ee shiiq umul ayaa Iyana kuwa dadbadan oo somaaliyeed ka careeysiiyay oo uu ku sheegay in rasuulka scw sharafkiisa uu meel uga dhacay .
Sedexdaan qalada ayaa laga diiwaan geliyay shiiq maxamed abdi umul.
Nabiga SCW oo uu ku sheegay in madaxiisa gabar xaas saxaabi aheeyd ay in jir ka guri jirtay in rasuulka taabashada dumarka ajnabiga u gaar aheeyd
in hilibka waraabaha xalaalyahay
in qofka gaala soo raaca kursiga madaxtinimada doona uu gaal yahay murtad yahay.
Shiiq sido kale waxaa uu taageray alshabaab oo dagaal kula jirtay xukuumadii KMG aheey waxuuna kamid ahaa waayo lasoo maray wadaado fikir ahaan mar taageersanaa dhaq dhaqaaqa al shabaab.
Afahayeenka culumada shiiq soomoow ayaa ka dalbaday Shiiq Mohamed abdi umul in uu shacabka somaliyeed weydiisto cafis sidoo kalana TV qaranka ka dalbaday in ay fiiriyaan dadka dartood qabri u galeen dhaawacna u yihiin geesiyaal in ay ku sheegaan culimo sidoo kala cid walba oo qamiis iyo koofi gashata ayna culima noqon Karin .
AFEEF arintan oo ah fikir diini ah iyo dood u dhaxeeysa culumada warbaahinta mareeg.com uma isticmalin wax aan ka aheeyn in bulshada helaan xogta wararka ka jiro somalida dhexdeda oo xogteenan maa dhaafsan soo gudbinta dooda u dhaxeeysa shiiq somow iyo umul.
XOG:- Dowlada Qatar oo kheyre ka dalbatay inuu is casilo iyo Farmajo oo radinaya badalkiisa